Dabaa cubbuu aganaa gettuu takkumaa gartee dhagettee? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDabaa cubbuu aganaa gettuu takkumaa gartee dhagettee?
Jaatanii Soraa Liiban tin, Adoolessa 5, 2018
Jalachallee holanii yaraa dubii jibumaa, Jibballee holanii jabaa dubii jalalaa, jedhanii mamaksii Oromoo Boorana tokkoo, akkasumaa, Jalachalee holanii dharaa dubii jibumaa, Jibballee holanii dhugaa dubii jalalaanii ree?
Dhugaa dhosinnee karaa faggoo demuu hindandanii, agguu namaa hindemsiftuu, me’ee waan wagaa 27n dabree keessaa turee, yeroo mottummaa cehumastii kamnee waan dhartii fakatuu, haalalu diqesinne.
Dhugaan uummataa Oromoo duraa dhoksaa turanii egaa ijoolleen Oromoo damaqxee, qabsoo jalqaabdee egallee hawalanillee dhugaan dhokachuu hindandennee, yeroo bulchinsii motumaa dargii kuffee mottumaan cehumsaa dhabattee keessattii dhabdii quqamaa Oromootii ijoolleen issii waregamaaturee ABOn yeroo diqaa tokkoofii uummataa issaa keessaa egaa chocho’aa tureen boddaa dabdii abbaa hirree akkaa qabengaa uummaataa oromoo akkaa barbadutii sammuu hindandenee duraanuu dursittee waan hubatteefii baraa 1982/3 A.L.H dhabachuu dhaniin dhugaa humnanii hukamsanii uummatanii akkaa walii hanqisanii tolichaniruu.
“Garaa yadii sennee nyatii hinsenuu” akkumaa jedhanii ilmaan Oromoo taa dhugaa gartee duraa gorsanii addoo sagalleen/nyatii ittii hin goriin/hinmiya’iin kunnoo wagaa 27 olii ganii jiruu.
Mamaksii Oromoo Booranaa tokkoo akkaan jedhaa;
“Abbaan waraa kaa hamattee malaa hamattee, kaan hinfudhiin kaan hamattee maluu;
Hattii waraa taa hamattee malaa hamattee, jalleen hamattee maluu”, jedhanii, akkasumaa,
Dhugaan yoo hamattee malaa hamattee, dhartii hamattee maluu jechudhanii, wanii rakkoollee wagaa 27 kanaa cufaa uumataa keennaa tursee dhugaa jalqabaa irraa gorammee waan tayyefii, gattii guddaa uummataa Oromoofii biyyittii guttuu basisisuu issaa waan gumii duraa dhokataa qabatinitii, uummattiin Oromoo hardhallee dogongoraa dharaa ufii didudhanii akkaa dhugaan galuu dandettuu yoo hulfinanii hinhojatiin ammallee midhamaa wagaa 27n dabree caaluu kaan gabulleen hindhaqamnee akkaa uumataa keennaa hingessinee, soddaa qabuu ibsuun barbadaa.
Me’ee ammumaa dhugaa jiruu halaluu;
Midiyyaan biyyitii Itiyoopiyyatifii addaa addaa waan hasamaa jiruufii dhugaa sadarkaa uummatatii hojatamaa jiruu akka fakenatii halaluu, Godinaa Booranaa ji’ootaan dabraan kanaa dulaa addatii irratii demaa jiraa. Godinii Booranaa godinallee Oromiyaa kaan nannoo dangaa jiranifii kaan warnanii Liyuu Poolisii kaan Mootumanii hidhachiseen ji’ootanii 9lii olii kaan agaa satii ammaa tanatii, uummattii, hardaa jirenaa issaa irraa buqayyee qayyee isatii hindebiyyinii, kaan iddoon jireenaa akkaa nanoo Oromiyyaa biraa fulaan jirennaa hinqophayinifii, kaan halii falaa aggaa ammallee malaa hinargatinii dhaa.
Godinaa Booranantii waranii nanoo dangaa wagottaa 27n Motumaan “EPRDF” biyyitii bulichaa turaan guttuu akkanumaa waranaa irraa turanii, waranii ittisaa biyyaa Itiyyophiyaa akkanumaa golii waraa Nannoo Shanii kaan Soomalee jedhamnii tahuu dhanii, uummataa Oromoo Booranaa hijechafii hidhansaa barabaraanii irratii rawachaa turuu dhanii, midiyaa waratiin immoo walii buhinsaa maraa bishanii jedchaa wagaa 27n darbanii uummataa Oromoo Booranaa macarsaa turanii.
Akkumaa affanumaa cininsaa bekkattii dhungollee bekkaa jedhanimitii ree? Haardhallee warumaa suniraa furmataa egachaa jiraa akkaminiin debii dhugaa uummatii keenaa hargachuu dandaa?
Me’ee waan jedbafii jedhee yoo setanillee waranii rayyaa ittiisaa biyyaa Itiyyoophiaa meshaa addaa waraa Liiyyuu Polisii Soomaletii kaan fayyee yaahuu Godinaa Booranaa gandaa hardaa Soodaa jedhamutii guyyaa gudanii qawellee gurgudanii uummataa fixanii aggaa ammallee warii uummataa fixxee suniin murtii hargachuu dhisii hidhamuu isanillee uummatii waan irraa bekkuu hinqabuu, garuu aggaa hardhallee mootumman qaamaa olanaa ergee uummataa hindubimnee, ittuumaa hansee ji’aa afuriin duraa akkasummaa qamummaa rayyaa ittiisaa biyyatiin guyyaa guddanii magalaa Mooyyalee keessatii namaa kudhanii olii fixannii uummatii baqattee Keenyatii takkee agaa hardhallee namii akkuumaa issanii tolichanillee jedhee hinjiruu. Hatahuu garuu yeroo Mumichii ministeraa biyyitii dhabillee morkatotaa hundaa yamichaa afaniillee tatuu dubachaa jiruutii uummataa halaa armaan olitii tiqammee kanaa keessaa turee ABOn waranaa/hadhaa offii keessaa bassaa jechuu dhaafii qoffaa dulaa namaa 42 offii keessaa qabuu uummatatii bobasuun ergaanii issii malifakatii? Halii kuniin Booranaa Moyyalee kasee agaa Nagellee Booranatii kaan walitii ejjuu dhaa.
Me’ee dabaa jiruu lalaa;
Badimmee murtessuufii akkaa addunyatuu waanii Itiyoophiyaan jibatteen dangaa baraa Koolonitii, keenaa immoo laftii seenaa durii hinlaluu tamaa abbaa irraa jiruu jedhanii, humnanii irraa gumii dhibuun.
Horaa bulaa Deebanaa!!